ग्यालक्सी नोट of का वालपेपरहरू अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस् ग्याजेट समाचार
ग्यालक्सी नोट wallp वालपेपर अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्
हामी सबैलाई जो मोबाइल फोन बजारमा नयाँ सुरूवातहरू मन पराउँछन्, हामी धेरै दिनदेखि चिन्तित भएका छौं औपचारिक प्रस्तुतीकरणको लागि पर्खदै नयाँ ग्यालक्सी नोट 7जुन २ अगस्तमा हुने छ। विभिन्न लीकमा आएको छ कि धन्यवाद, हामी पहिले नै नयाँ सामसु flag प्रमुख को सबै विशेषताहरु थाहा छ र हामी पनि धेरै अवसरहरु मा यसको डिजाइन हेर्न सक्षम छौं।
आज हामी तपाईलाई प्रदान गर्न सक्छौं, एन्ड्रोइड प्राधिकरणलाई धन्यवाद हामी सामसुapers ग्यालेक्सी नोट7मा फेला पार्दछौं कि वालपेपर डाउनलोड को संभावना। यो सामान्य भन्दा बजार हो कि प्रत्येक नयाँ स्मार्टफोनले बजारमा हिट गर्दछ यसको आफ्नै वालपेपरको साथ गर्दछ र नयाँ ग्यालक्सी नोट एक अपवाद हुने थिएन।
यी वालपेपरहरू हामी मध्ये धेरैलाई नयाँ हुँदैन किनभने हामी उनीहरूलाई पहिले देख्न सक्थ्यौं र अन्य यदि ती पूर्ण रूपमा नयाँ हुन् भने। यदि तपाईं कुनै पनि कोषहरू डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ जुन हामी ग्यालक्सी नोट7मा प्रयोग गर्न सक्दछौं, हामीले यस लेखको अन्त्यमा डाउनलोड लिंक राख्यौं। यो डाउनलोड नगरीकन जानुहुन्छ पूर्ण रूपले नि: शुल्क हो र तपाईं कुनै पनि मोबाइल उपकरणमा यी कुनै पनि कोष प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यस समय, आधिकारिक रूपमा नयाँ ग्यालक्सी नोट know लाई जान्नको लागि यो समय केहि बढि दिन पर्खिने समय हो, यद्यपि हामी टर्मिनलहरूमध्ये एकमा भेट्न जाँदैछौं जुन मार्केटलाई क्रान्तिमा ल्याउन सक्दछ।
ग्यालक्सी नोट of को नयाँ वालपेपरको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ जुन केवल केहि दिनमा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ?.
डाउनलोड गर्नुहोस् - सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट Wallpapers वालपेपर
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » ग्यालक्सी नोट wallp वालपेपर अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्
फ्रान टोनक भन्यो
माफ गर्नुहोस्, तर यसले फ्ल्यापबोर्डबाट वा वेबबाट कोषहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिदैन, यसले मलाई इन्टरनेट जडानको लागि सोच्छ जब म वाइफाइ वा डाटासँग जोडिएको हुँ।
फ्रान्स टोनकलाई जवाफ दिनुहोस्
यो उही भन्यो
तिनीहरू काम गर्दैनन्
Estemism लाई जवाफ दिनुहोस्
योगदानका लागि धन्यवाद, तर रकमहरू कुरूप छन्, सामसु forको लागि खराब।
R2D2 लाई जवाफ दिनुहोस्
म्याकबुक वा म्याकबुक एयर: यी दुईमध्ये कुनचाहिँ मेरो लागि उत्तम छ?
पोकेमोन GO ले टोली नेता र दुई महत्वपूर्ण समाचारहरू आउँदछ जुन आउँदो वर्षहरूमा आउँदछ